I-10 eziphezulu kakhulu kwiIyunivesithi ezikwi-Intanethi e-Australia ngoku
Nalu uluhlu lwezona yunivesithi zibalaseleyo kwi-Intanethi e-Australia okwangoku ezona zinkulu kwaye zibalaseleyo phakathi kwabo kunye neenkqubo ezikhoyo ezifumaneka kwiiyunivesithi nganye kwi-Intanethi
Ukulandela umba wokuqhambuka kweCovid19, eyona ndlela ifanelekileyo, elungileyo yokufunda ngoku ikwi-Intanethi kwaye eli nqaku linika iinkcukacha ezipheleleyo kwiiyunivesithi ezibalaseleyo ezikwi-Intanethi e-Australia okwangoku.
Sinemixholo yamanqaku ahlaziyiweyo ngoku izifundo ze-intanethi zamahhala kunye neziqinisekiso kwaye ezinye zazo zijolise kwikhosi njenge Izifundo ezilungileyo ezikwi-Intanethi ekuthengiseni izatifikethi Ngelixa ezinye zazo zijolise kwilizwe njengesikhokelo Izifundo zasimahla kwi-Intanethi eCanada ezinezatifikethi.
Kwiinkqubo ezijolise kwikhosi, unokufunda ifayile ye- Ikhosi yolawulo lweprojekthi kwi-intanethi kwaye ufumane isatifikethi sasimahla ukugqitywa ngempumelelo.
Ngoku ubuyela kumxholo wokuqala, zininzi iiyunivesithi eOstreliya ezibonelela ngezifundo ezikwi-Intanethi kodwa nazi iiyunivesithi eziphambili ze-Intanethi eOstreliya ekufuneka uqale waziqwalasele.
Ukufunda kwi-Intanethi kunezibonelelo zako, uya kufunda ngokukunceda, wonwabele isibonelelo sexesha le-intanethi kwaye ngenxa yesifo esiqhubekayo, lelona nyathelo lilungileyo onokulithatha ukuze ufunde ngeli xesha kwaye ufumane izatifikethi. Funda ubuchule, ufumane isidanga, ube ngcono kwizifundo xa ubhubhane ugqithile.
Ungaqala ukuzibuza, sizibeka njani ezi yunivesithi njengeeyunivesithi eziphambili zase-Australia ezikwi-intanethi?
Ewe, akukho lula kakhulu ukuwabeka kwinqanaba kodwa senza into ekufuneka siyenzile, ukuzisa okona kulungileyo kuwe.
Okokuqala, senza uphando olubanzi kwiyunivesithi nganye e-Australia enikezela ngezifundo ezikwi-Intanethi emva koko siqala ukuzibeka kwinqanaba ngokujonga okwenyani kwi-Intanethi kulandelwa bubunzulu bekhosi kunye nokuba ziguquguquka kangakanani na, kubandakanya nokulula kwenkqubo yokufaka isicelo kuyo yonke inkqubo.
Ngale ndlela siyakwazi ukukuzisa iiyunivesithi ezilungileyo ze-10 ezikwi-Intanethi e-Australia ukuba ziqwalasele kuqala.
Eyona Yunivesithi ikwi-Intanethi iOstreliya ngoku
IYunivesithi yaseNew England (UNE)
IYunivesithi yaseDeakin (DE)
IYunivesithi yaseCharles Sturt (CSU)
IYunivesithi yeSouth Queensland (USQ)
University of Edith Cowan (ECU)
IYunivesithi yaseSouthern Cross (SCU)
IYunivesithi yaseCanberra (UC)
IYunivesithi yaseTasmania (UTAS)
IYunivesithi yaseSwinburne yeTekhnoloji (SUT)
IYunivesithi yaseCQ (CQU)
Isiphelo kwiiYunivesithi eziDala ngokuBalaseleyo kwiOstreliya
IYunivesithi yaseNew England (UNE) -IYunivesithi yaseOnline
IYunivesithi yaseDeakin (DE) -IYunivesithi yaseOnline
IYunivesithi yaseCharles Sturt (CSU) -IYunivesithi yase-Intanethi
IYunivesithi yeSouthern Queensland (USQ) -IYunivesithi yaseOnline
IYunivesithi yase-Edith Cowan (ECU) -IYunivesithi yase-Intanethi
IYunivesithi yaseSouthern Cross (SCU) -IYunivesithi yaseOnline
IYunivesithi yaseCanberra (UC) -IYunivesithi yase-Intanethi
IYunivesithi yaseTasmania (UTAS) -IYunivesithi yase-Intanethi
IYunivesithi yeTekhnoloji yeSwinburne (SUT) -IYunivesithi yase-Intanethi
IYunivesithi yaseCQ -IYunivesithi yaseOnline -IYunivesithi yase-Intanethi
Le yeyona yunivesithi iqhuba kakuhle kwi-Intanethi e-Australia inenqanaba elifanelekileyo lokuphumelela, ibonelela ngezifundo eziguqukayo, ibonelela ngeedigri ezisemgangathweni, kunye nenqanaba lokwoneliseka okuphezulu. I-UNE ibonelela ngezifundo ezininzi kodwa iphakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo kubugcisa, ishishini, imfundo kunye nesayensi.
IziDanga ezikwi-Intanethi ezinikezelwa yiDyunivesithi yaseNew England
Isidanga seComputer yeSayensi
I-Bachelor yeSayensi yeNdalo
ISatifikethi seMatriki kwi-Akhawunti
Imfundo no ku fundisa
I-DE ikwanayo nenqanaba lesifundo esifanelekileyo kwaye inikezela ngedigri esemgangathweni kubafundi, iyunivesithi yaziwa kakuhle ngobunjineli, imfundo, impilo, kunye netekhnoloji yolwazi kodwa inolunye uluhlu lwezifundo ezininzi onokukhetha kuzo.
Amanqanaba akwi-Intanethi anikezelwa yiDyakin University
Isidanga soKhuseleko lweCyber
Isidanga sokuSebenza kweNtlalontle
IDiploma yesiDanga kwiAccounting Accounting
IiMasters zoLawulo lwaBasebenzi
Isatifikethi sokuthweswa isidanga kwiAccounting Accounting
Le yeyona yunivesithi inkulu kwi-Intanethi e-Australia kwaye ibonelela ngezifundo ezininzi onokukhetha kuzo kodwa i-CSU iphakanyisiwe kakhulu kubugcisa, kwisayensi nakwi-IT
IziDanga ezikwi-Intanethi ezinikezelwa yiYunivesithi yaseCharles Sturt
I-Bachelor yeSayensi yezeMpilo
UMphathi woKhuseleko lweCyber
I-Bachelor Information Technology
I-USQ ibonelela ngeedigri ezisemgangathweni kunye nezifundo eziguquguqukayo phantse kuwo onke amabala athandwayo kodwa zilinganisiwe kubunjineli nakwizikhundla zempilo.
IziDanga ezikwi-Intanethi ezinikezelwa yiDyunivesithi yase-Southern Queensland
I-Bachelor yeeNkonzo zoLuntu
Uluhlu lweeMixeko kunye neZithili
Isidanga soNxibelelwano noLuntu
I-ECU ibonelela ngeedigri ezisemgangathweni kunye nezifundo eziguqukayo, iqhuba kakuhle kwicandelo lezeshishini kunye nomthetho.
Amanqanaba akwi-Intanethi anikezelwa yiYunivesithi yaseEdith Cowan
INkosi yoLawulo lokusiNgqongileyo
I-Master of Accounting Accounting
Isidanga semfundo kunye nokufundisa
Iikhosi ze-SCU ziyaguquguquka kwaye ubukhulu becala zibonelela ngezifundo zasemva kwesidanga kwi-Intanethi. I-SCU inoluhlu olubanzi lwezifundo zasemva kwesidanga onokukhetha ukuzifunda kwi-Intanethi.
Amanqanaba akwi-Intanethi anikezelwa yiYunivesithi yaseSouthern Cross
Umlawuli oyiNtloko woLawulo lweProjekthi
UMphathi woLawulo lwezoRhwebo
IDiploma yesiDanga sobuNesi
Idiploma yesidanga kwishishini
I-UC sisikolo esikwi-Intanethi esisebenzisana nesikolo saseDucere seShishini ukuvelisa iziphumo zomsebenzi ezinamandla. I-UC ibonelela ngeziidanga zeshishini zilandelayo;
IziDanga ezikwi-Intanethi ezinikezelwa yiDyunivesithi yaseCanberra
I-Bachelor yoShishino oluSebenzayo (ukuThengisa)
Isidanga soSomashishini oSebenzayo
I-Bachelor yoShishino oluSebenzayo (uLawulo)
ISatifikethi seMatriki kwiDatha kunye noLawulo lweCyber
I-MBA (i-Innovation kunye neNkokheli)
I-UTAS ibonelela ngalo lonke uhlobo lokufunda nakubo bonke abantu kubandakanya abantu abaqolileyo, abaphuma esikolweni kunye necourse, abafundi abakwi-Intanethi.
IziDanga ezikwi-Intanethi ezinikezelwa yiDyunivesithi yaseTasmania
Bachelor yo shishino
I-SUT yenye yeyunivesithi ekumgangatho wehlabathi enoluhlu lweeyunivesithi eziphambili ze-Intanethi e-Australia.
Banikezela ngezidanga ezakhelweyo kwi-intanethi kubafundi kwaye bagxile kwi-IT, ishishini, kunye nonxibelelwano.
Amanqanaba akwi-Intanethi anikezelwa yiYunivesithi yaseSwinburne yeTekhnoloji
I-Bachelor yeSayensi yeNtlalo
I-CQU ibonelela ngezifundo eziguqukayo kwaye ibonelela ngeedigri ezisemgangathweni kuzo zonke iintlobo zabafundi. I-CQU ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda kunye neejors onokuzifunda kwi-Intanethi.
Amanqanaba akwi-Intanethi anikezelwa yiYunivesithi yeCQ
Isidanga se-Medical Science
I-Australia inezona yunivesithi zibalaseleyo emhlabeni kwaye ibonakalisile ukuba ineziphumo ezilungileyo kwizifundo ezikwi-Intanethi, ezi yunivesithi zivelise abafundi abaphumeleleyo kunye neengcali.
Ezona zibonelelo ziphambili zokufunda kwi-Intanethi ibhalansi, ixesha, ulawulo kunye nokwenza lula. Abantu abasebenza banokuthatha ikhosi yokwenza ngcono izakhono zabo, baqale ikhondo lomsebenzi omtsha, okanye babe ziingcali kwicandelo labo langoku.
Inani elilungileyo labafundi bamanye amazwe abavela kwihlabathi liphela baye bakwazi ukufumana izidanga kunye nezatifikethi zokugqitywa kwezifundo ezininzi kwiiyunivesithi zaseOstreliya kwi-Intanethi ukwandisa ulwazi lwabo nokwenza ii-CV zabo.
Iinkqubo ezikwi-Intanethi zikuvumela ukuba ufunde ngaphezulu kwesifundo esinye ngexesha.
Uluhlu lweeYunivesithi eziSimahla kwi-Intanethi zaBafundi beZizwe
Iikhosi zasimahla zaselwandle ze-Biology ze-6
Eyona Yunivesithi ikwi-Intanethi iOstreliya ngokuimfundo ye-intanethi e-AustraliaIzifundo ezikwi-Intanethi e-Australiakwiiyunivesithi ezikwi-Intanethi e-AustraliaIiyunivesithi eziphezulu ze-Intanethi e-Australia
Post Previous:Ubungcali obuphezulu be-15 bokugula okungapheliyo kwaBafundi